जतिसुकै बिजी भएपनि फोटो छोएर सेयर गर्नुहोस्, आफुपनि येस्तो हुनबाट बच्नुहोस्!!!
साह्रै मन रुहायाे याे तस्बिरहरूले अाज नाबालक बच्चा संग ईण्डियाकाे गुजरातमा राेजगार गर्दागर्दै श्रीमानकाे काेराेना बाट मृत्यु !यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल&; क्लिक गर्नुहोला !
यो पनि पढ्नुहाेस्,
घ’ट’ना’मा सकुशल रहेका वृद्धका एक नाती तेजबहादुरका छोरा नरेश दुबईबाट बुधबार फर्किए पछि अन्तिम संस्कार गरिएको हो । उनी कान्छो छोरा हुन्। जेठा छोरा रमेश भने मलेसियामा छन्। परिवारका ६ जनाको श व देखेपछि उनले मन थाम्न सकेनन् ।
तर अहिलेसम्म कसले र किन घ’ट’ना गरायो भन्ने खुलिसकेको छैन। संघीय इकाइ प्रहरी कार्यालय धरान, जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभा र केन्द्रीय अनु’सन्धान ब्यूरो (सिआइबी) को टोली अनुसन्धानमा खटिएका छन्। साथै प्रदेश नम्बर १का प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक अरूणकुमार बिसी घ’ट’नास्थल तर्फ गएका छन्।
२०७८ भाद्र २७, आईतवार ०३:३० 1 Minute 198 Views